Puntland oo sheegtey in ay qabteen koox ka tirsan al-Shabaab • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Puntland oo sheegtey in ay qabteen koox ka tirsan al-Shabaab
Puntland oo sheegtey in ay qabteen koox ka tirsan al-Shabaab
July 11, 2017 - By: HORSEED STAFF
War ka soo abxay ciidanka Amniga ee Puntland PSF ayaa lagu sheegay in ay gacanta ku dhigeen 14 dhalinyaro ah oo ay ku jiraan ajaanib kuwaas oo ka tirsan al-Shabaab kuna socdey in ay kamid noqdaan malaysiyada al-Shabaab ee ku sugan buuraha Calmadow.
Dhalinyaradan waxaa qabtey dad reer guuraa ah oo deggan dhulka ku dhaw magaalada Garoowe, kluwaas oo ku wareejiyey laamaha amniga ee Puntland.
Warka ka soo abxay PSF ayaa lagu yiri:
Waxaa ciidamada amniga ee PSF u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan 14 Alshabab ah oo u socda Buuraha calmadow ayagoo marayey duleedka magalada Caasumada ee garowe. Waxaa mahad iska leh Allah oo noo suura geliyey qabashadoodii way mahadsanyihiin dhamaan laahaama kale ee amniga oo nala shaqeeyey. Shacabkeena sharafta badan ee reer Puntland iyo soomaaliya waxaanu ku dhiiragelinaynaa inay sidaas iyo si la mid ah ciidanka ula shaqeeyaan.
Sidee loo qabtey dhalinyarada al-Shabaabka lagu eedeeyey?
Dhalinyarada la qabtey ayaa watey gaari, waxaana ay ka leexdeen waddada laamiga ah, lama garan karo halka gaarigu uu ka soo qaadey. Dadka deegaanka Cuun ee kaabiga ku haysa magaalada Garoowe ahna dhulbeereed ayey dhalinyaradaani isugu sheegeen in ay ahaayeen Tahriibayaal.
Markii ay gaareen tuulada Timir oo aan wax badan ka fogeyn deegaanka Cuun, waxaa halkaas ku celiyey dhalinyaro hubeysan oo reer guuraa ah kuwaas oo warbixin ka helay dadka iska leh beeraha Cuun ee markii u horeysey arkey dhalinyarada. Waxaa halkaas gaarey ciidan deegaanka ilaaliya kuwaas oo la xiriirey taliyaha qaybta gobolka Nugaal oo markii danbe kala wareegay.
Bilihii u danbeeyey waxaa gobolka Nugaal laga sheegi jirey warar aan cidna xaqiijin oo ah in la arkey dhalinyaro lugeyneysa oo ka yimid dhanka xeebta Hindiya.
Ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo saxaafaddu hayso, halka kooxda la qabtey ay ka yimaadeen, gaariga ay wateen noociisa, halka uu ka diiwaan gashanaa, dhulka ay soo mareen? iyo su’aalo kale oo badan ayaa laga sugayaa in mamaulku faah-faahin ka bixiyo.
Waxaa wadada dheer ee isku xirta Bosaso ilaa Garoowe ku safra Itoobiyaan tahriibayaal ah, kuwaas oo aan maamulku waxba ka qaban, waxaana dadka ka faalooda amniga ay sheegaan in dadkaan cidkasta ay ku qaraaban karto oo iska soo dhigi karto Tahriibayaal.